Waxaa la sheegay in 20/80 guryaha is-kaashatada si sharci darro ah lagu iibinayo Beeralayda oo dhulkoodii laga xayuubiyey si loo horumariyo oo ay gaadheen 20/80 guryaha is-kaashatada; Shaqsiyaad ayaa u sheegay New Morning in ay si sharci darro ah u iibinayaan guriga maadaama aysan haysan lacag ku filan oo ay ku dhammeeyaan guriga - ዜና ከምንጩ
Waxaa la sheegay in 20/80 guryaha is-kaashatada si sharci darro ah lagu iibinayo Beeralayda oo dhulkoodii laga xayuubiyey si loo horumariyo oo ay gaadheen 20/80 guryaha is-kaashatada; Shaqsiyaad ayaa u sheegay New Morning in ay si sharci darro ah u iibinayaan guriga maadaama aysan haysan lacag ku filan oo ay ku dhammeeyaan guriga
HaileMichael Aboneh, mid ka mid ah dadka dacwooday; Waxa uu sheegay in beeraleyda laga qaatay dhulalkooda si ay u dhistaan si sharci darro ah, maadaama ay muddo dheer kadib soo geli waayeen guriga.
Qofka yidhaahda guri lama iibin karo si waafaqsan sharciga Hay’adda Horumarinta Guryaynta;
Si kastaba ha ahaatee, beeraley badan ayaa wali iibinaya guryahooda. Tusaale ahaan, waxay yiraahdaan, “Saaxiibkay ayaa iibiyey.” Waxa la yidhi ma dhici karto in la iibiyo, laakiin waanu aragnay inay suurtogal tahay.
Dad badan ayaa sheegaya inay wax ku iibinayaan qiimo aad u jaban, iyagoo leh, “Immisa lacag ah ayaan guriga ku geli karaa?”
“Dooddii hore markii golaha nalagu siiyey ka dib, waxa nalagu ballan-qaaday guddiyada in wixii ay xukuumaddu qabanayso ay xukuumaddu daboosho,” ayuu yidhi. Hasa ahaate waxa uu sheegay in balan qaadkaasi uu ahaa mid aan fulin.
Iftiinka guriga; Ma jiro adeeg biyo ama waddo ah; “Dowladdu waxay bixin doontaa kharashka,” ayuu yiri HaileMichael. Gebre Meskel Aboneh, oo xubin kale ka ah kooxda ayaa yiri: Waxay sheegeen in dhul gaaraya 20,000 mitir oo laba jibbaaran lagala wareegay si loo horumariyo. Waqtigaas, waxaa loo sheegay in gurigooda la dhamaystiri doono dhammaadka maalinta, laakiin Waxa uu sheegay in taasi cakiskeeda ay dhacayso.
Hadaba dadka leh guriga nala siiyay ma dhamaystirna,waxaa la fahamsan yahay in Gebre Meskel uu u baahan yahay ilaa 200,000 oo Birr si uu si buuxda u galo, beeralaydana ay ku qasban yihiin inay iibiyaan guriga, sababtoo ah ma awoodaan inay iibsadaan. Weydii wakiilada loo xilsaaray kiiska dhawaan: Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in aysan wax jawaab ah ka helin dowladda, balse waxa uu sheegay in dowladda aysan wax jawaab ah ka helin.
axa uu intaa ku daray in ninka beeralayda ah lagu yiqiin in uu ku hawlanaa beer-falashada; Haddaba, in dhulkii lagala wareegay lagu beddesho, sidii ballantu ahayd, waa in la siiyaa guri dhammaystiran, laakiin xaggee ka heli karaa 200,000 oo Birr oo uu ku dhammeeyo gurigaas? Waxay waydiiyeen.
Qofka kale ee codsaday inaan la magacaabin: Guriga ma geli karin sababtoo ah waxaan ahayn caruur beeraley ah; Sidaas darteed ayay yiraahdeen dowladda waa in ay soo dhameystirtaa aqalkaas sidii ballantu ahayd. Wuxuu intaas ku daray inay jiraan dad aan weli guryahooda gaarin; Beeraleyda goobta soo gaartay ayaa sheegay in aysan geli karin qarashka ku baxaya buuxinta guriga. Subaxnimadii, waxay la kulantay Thomas Debele, oo ah ku xigeenka agaasimaha guud ee dhismaha ee shirkadda horumarinta guryeynta Addis Ababa, iyada oo ka jawaabeya
cabashada ka timid dadka cabashada ah. Waxa uu ku micneeyay in aan la iibin karin gurigaasi, dhibaatada jirtana lagu xalin karo sidatan.
Sida uu sheegay Thomas, shaqada ayaa dib u dhacday xaaladda hadda jirta awgeed; Waxa jira guryo aanu dhamaystirnay oo aanu gaadhsiinay hadba inta awoodeena dhaqaale tahay; Waxa ay sheegeen in inta dhiman ay soo dhameystiri doonaan oo ay ku wareejin doonaan. Ma jebinno hadalkayaga, “Annaga dhinaceena ayaanu ka qaadan doonaa, balse dadka cabanaya waxay ku xisaabtami doonaan xaaladda taagan,” ayuu yidhi. Thomas wuxuu sheegay in magaalada ay ku yaalaan in ka badan 2,222 dhismo. Waxa uu sheegay in aysan suurta gal ahayn in mar qura la dhameystiro, balse dowladda midna. Thomas wuxuu ku daray in 20/80 dukaamada aysan weli diyaar ahayn; Markay yidhaahdaan waan bixinaynaa, waxay yidhaahdaan: Waxa uu sheegay in ciddii kale ee dacwoonaysa ay imanayso xafiiska oo ay soo gudbinayso codsi anaguna aanu ka jawaabi doono.
Total views : 7537532